जनताकाे हित चाहने र जनताकै पक्षमा बोल्ने रवि लामिछानेकाे बास्तविक यस्तो कथा…हेर्नुहाेस् भिडियो सहित। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
जनताकाे हित चाहने र जनताकै पक्षमा बोल्ने रवि लामिछानेकाे बास्तविक यस्तो कथा…हेर्नुहाेस् भिडियो सहित।
नेपाली चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने नेपालबाट अमेरिका पलायन भएका नेपाली पत्रकार हुन् । सन् २०१३ को अप्रिलमा नेपालको न्युज २४ प्रस्ताेता क्रममा टेलिभिजनमा निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर उनले विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
हुन त अहिले उनकाे चर्चा निकै छ र जन्ताकाे साथ र माया पनि उतिकै पाएका छन् । उनकाे जन्म सेप्टेम्बर ५, १९७४ भक्तपुरमा भएकाे हाे । अहिले उनी ४५ बर्षका भएका छन् । नेपाली रवि लामिछाने अहिले न्युज २४ टेलिभिजनबाट सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रम चलाउछन्।
उनकाे पेसाकाे कुरा गर्नु पर्दा उनी टिभी पत्रकार हुन् ।
उनले पत्रकार क्षेत्रबाट जन्ताकाे ठूलाे साथ पाएका छन् ।
उनकाे चि’नारी भनेकाे नै सबै भन्दा लामो अन्तर संवाद कार्यक्रम चलाएकाले उनी निकै चर्चामा रहेका छन् ।
उनी चाहान्छन् कि देशकाे लागि ल ड्ने छु यदि जन्ताकाे साथ र माया पाए । उनले सुरुवाद गरेकाे कार्यक्रम सिधाकुरा जनतासंग निकै चर्चित रहेकाे छ । बि.सं. २०७६ भाद्र महिनामा उनका सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आ त्मह त्या पश्चा त्, उनले रेकर्ड गरेको भिडियोको आधारमा रवि
लामिछानेलाई प्रहरीले प क्राउगरी अदा’लतमा पेश गरेको थियो। पछि यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भन्दै चितवन जिल्ला अदा’लतले आगामी दिनमा मु द्दाको बारेमा अन्त’र्वार्ता नगर्ने श’र्तमा पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
Previous तुलसीपुर उप-माहानगरपालिकाका प्रशासकिय प्रमुख नागढुङ्गाबाट घु’ससहित प’क्राउ…हेर्नुहोस् ।
Next घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ!
“महँगोमा किनेर, भारतलाई सस्तोमा, विद्युत् बेच्दै” प्राधिकरण”
“सुशान्त खत्रीले भने, ‘बिनाकसुर नियन्त्रणमा, लिएर झा’पड हा’नियो”
“कांग्रेस सभापतिमा, ल’डने सुजाता, कोइराला,को, घोषणा”